Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fahadisoam-piaramanidina 10 mahazatra mandaniam-bola anao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Amin'ny tsy famelana fotoana ampy hahatongavana any amin'ny seranam-piara-manidina, ny fidirana an-trano ary hialana amin'ny fandriam-pahalemana, dia mety hahita ny sidina ianao. Tena lafo tokoa izany raha toa ianao ka namandrika tamina kaompaniam-pitaterana an-tseranana izay tsy manome famerenam-bola.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa seranam-piaramanidina maro no miantoka ny mpandeha amin'ny isa nomeny finday.
Alao antoka fa alao ny sakafonao manokana alohan'ny sidina mba hitsitsiana vola hampiasaina rehefa tonga any amin'ny nalehanao ianao.
Alao ny volao takalo amin'ny fotoana betsaka alohan'ny hahatongavanao amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny dianao.
Miaraka amin'ny maro amintsika no mandeha amin'ny dia iraisam-pirenena voalohany nataontsika tao anatin'ny fotoana lava be, ireo manam-pahaizana momba ny dia dia nanambara ireo hadisoana iraisan'ny seranam-piara-manidina 10 izay mandoa vola aminao amin'ny dianao.
1. Mahazo taxi
Na dia mety ho mora aza ny mahazo taxi mankany amin'ny seranam-piaramanidina, dia fitsangatsanganana taxi mankany seranam-piaramanidina lafo foana, indrindra amin'ny fotoana tampony. Mba hitazonana ny vidiny dia alao antoka fa mialoha ny hamandrihana mialoha ny famindrana seranam-piaramanidina, amin'izay ianao tsy mipetraka fotsiny mijery ny metatra miakatra! Raha tsy izany, zahao raha misy fiara fitateram-bahoaka mankany amin'ny seranam-piara-manidina, satria mora kokoa ireo ary tsara kokoa ho an'ny tontolo iainana.
2. Manadino ireo tavoahangin-drano azo averina refill
Na dia mety ho zavatra kely aza ny mahatadidy ny fonosana, ny manadino handray tavoahangy feno rano tsy azo averina indray amin'ny alàlan'ny fiarovana dia mety handany anao any aoriana. Amin'ny ankapobeny, ny fivarotana seranam-piaramanidina dia lafo kokoa ny miasa, noho izany dia avo kokoa ny vidiny.
Most seranam-piaramanidina manana tobin-drano maimaimpoana ahafahanao mameno ny tavoahanginao rehefa mandalo fiarovana ianao. Amin'ny fakana ny tavoahangy azo ampiasaina dia tsy vitan'ny hoe manangona vola fotsiny ianao fa manao ny kely indrindra amin'ny tontolo iainana koa.
3. Fijanonana eny amin'ny seranam-piaramanidina
Betsaka ny olona misafidy ny hijanona amin'ny seranam-piaramanidina satria mihevitra izy ireo fa akaiky sy mety. Na izany aza, lafo ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina, ary amin'ny tranga sasany, ny fijanonan'ny seranam-piaramanidina dia mety mihoatra ny vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidinao mihitsy aza.
Tsy lafo ihany, fa ny fiaranao mety tsy ho azo antoka, satria avela any ivelany hiatrika ireo singa, ary efa maro ireo tranga voarakitra an-tsoratra momba ny fiara miverina simba.
Azonao atao ny manangona fotoana sy vola amin'ny alàlan'ny fijerena ireo zaridaina, safidy matory ary sidina samihafa. Ireo dia mamela anao hipetraka soa aman-tsara ao amin'ny hotely ny fiaranao mandritra ny dia ataonao, mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ny alina talohan'izay ary koa mampita anao sy miverina amin'ny seranam-piaramanidina. Misafidy park, safidy manidina manidina manome anao tahan'ny fifaninanana bebe kokoa ho an'ny fijanonanao.
4. Tsy mikasa mialoha
Fantatsika rehetra fa afaka miasa ny seranam-piaramanidina, miaraka amina filaharana miadana miadana sy ny fanemorana hafa, noho izany dia zava-dehibe ny drafitra ny dianao mankany amin'ny seranam-piara-manidina ary manome fotoana be dia be alohan'ny sidinao.